कसले गर्यो नेपाली साबुनहरुको बदनाम हुने गरी विज्ञापन ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बिगत केही दिन देखी नेपालका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुमा कतै तपाईले प्रयोग गरिरहेको नांगो साबुनमा बोसो त छैन ? आफुले प्रयोग गरेको साबुनमा के प्रयोग भईरहेको छ ? के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने थाहा पाउनु हरेक उपभोक्ताको अधिकार हो । त्यसैले जानकारीयुक्त लेभल भएको साबुन प्रयोग गरौ, बोसो प्रयोग भएको साबुन प्रयोग नगरौ भन्ने भावको बिज्ञापन नेपालका प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरुमा ज्याकेट पेजका रुपमा प्रकाशित भईरहेको छ ।
जुन बिज्ञापनले ‘लेभलयुक्त साबुनको प्रयोग गरौ’ भन्दै दैनिक लाखौ रुपैया छापा माध्यामहरुमा खर्च गरिरहेको छ । त्यस बित्रज्ञापनले नै पाठकलाई सबै भन्दा बदी जानकारी लुकाई रहेको छ । लाखौँको लगानिमा नेपालका दैनिक पत्रिकाहरुमा कुनैमा ज्याकेट बिज्ञापन र अधिकांश पत्रिकाहरुमा प्रकाशित बि ज्ञापन पनि कसले प्रकाशित गर्यो भन्ने कुरामा पत्रिकाहरुले पाठकलाई अन्धकारमा राखिरहेका छन् ।
जुन बिज्ञापनमा बिज्ञापनदाताका बारेमा कुनै जानकारी नै खुलाईएको छैन, त्यो बिज्ञापनको बिश्वसनियता के त ? पत्रिकाहरुले बिज्ञापनदाता बाट मोटो रकम लिई त्यसलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरे । तर जुन बिज्ञापनमा पुर्णरुपमा नेपाली भाषाको प्रयोग गरिएको छ । त्यो बिज्ञापनको मुख्य कुरा यो दृष्य सचित्र वर्णन काल्पिनीक हो भन्ने कुरालाई भने अंग्रेजी भाषा र सानो अक्षरको प्रयोग गरिएको छ । त्यो किन गरियो ? यसको जवाफ पत्रिका वा बिज्ञापनदाता कसले दिने ?
बिज्ञापन पनि एउटा पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि त्यसलाई एउटा समाचार सामाग्रिका रुपमा पाठकले ग्रहण गर्ने गर्दछन् । तर यो बिज्ञापनमा भने पाठकमा भ्रम पैदा गरि त्यसबाट अदृष्यरुपमा बिज्ञापनदाताले आफ्नो निहित व्यबसायिक स्वार्थ परिपुर्ति गर्न खोजेको बुझिन्छ ।
यो बिज्ञापन कसले कसको हितको लागि प्रकाशन गरियको हो भन्ने कुरा अझै पनि खुल्न सकेको छैन तर पनि नेपालमा उत्पादित नाङ्गा लुगा धुने साबुनहरुमा भने बोसोको प्रयोग हुदै आएको छ । जसलाई नेपालको नाप —तौल तथा गुणस्तर बिभागले समेत गुणस्तरिय प्रमाणित गरिसकेको छ ।
नेपालमा बिक्रि बितरण भईरहेका नाङ्गा लुगा धुने साबुनहरुमा यो के बाट र्निमाण भएको हो ? यसको प्रायोजन के का लागि हो भन्ने कुराको जानकारि सहितको लेबलको भने प्रयोग भईरहको छैन यो कुराको जानकारी पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । जसबाट नेपालका उत्पादन कम्पनिहरुले उपभोत्तालाई बन्चित गराई रहेका छन् त्यसकारण पनि साबुनहरुमा लेभलको प्रयोग हुनु पर्ने भाव बिज्ञापनको अत्यन्तै सबल पक्ष हो ।
तर यो बिज्ञापन उपभोक्ताको हितको लागि वा आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्तिका लागि प्रकाशन गरिएको हो भन्ने कुरा अझै अन्यौल नै छ । यो बिज्ञापनले एकातिर साबुन के बाट र कसरी बनेको हो भन्ने जानकारि सहितको लेबल हुनु पर्ने कुराको वकालत गर्दै उपभोक्ताको हितको संरक्षण गर्न खोजे जस्तो देखिन्छ भने अर्को तर्फ उपभोक्तामा कतै तपाईको साबुनमा बोसो त छैन भन्दै उपभोत्तामा आतंक सृजना गरेको छ जबकी त्यो बिज्ञापन दिने संस्थालाई पनि राम्रोसंग थाहा भएको हुनु पर्दछ कि लुगा धुने साबुनमा कच्चा पदार्थको रुपमा बोसोको प्रयोग हुनु कुनै नौलो कुरा होइन ।
यो बिज्ञापन जुन उद्देश्यका साथ प्रकाशन भईरहेको भन्ने कुरा निकट भविष्यमै थाहा भईहाल्ने कुरा हो तर पनि बिज्ञापन प्रकाशन गर्दा चाहे त्यो जनहितका लागि प्रकाशित बिज्ञापन होस् वा व्यवसायिक बिज्ञापन होस् त्यसमा बिज्ञापनदाताको बारेमा स्पष्टरुपमा खुलाउँदा पाठकमा सहजता हुन सक्दछ ।
बजारमा रहेका बिभिन्न बस्तुहरु कुन गुणस्तरिय छन् ? कुन सामाग्रिहरु उपभोक्ताको लागि उपयुत्त छन् वा छैनन् ? भन्ने कुराको नियमन गर्ने जिम्मा सरकारले आफ्ना बिभिन्न निकायहरु दिएको छ तर जनहितका नाममा कुनै पनि पक्ष बाट आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्तिका निमित्त कुनै पनि व्यवसायमाथि धावा बोल्नु नेपालको कानुन विपरित छ । संचारमाध्यामको मर्म र धर्म विपरित छ । पैसाका नाममा जस्ता विज्ञापन पनि छाप्दै जाने हो भने त्यसको परिणाम भयावह हुने निश्चित नै छ ।
अहिलेको यो घटनाबाट सरकारले पनि एउटा पाठ सीक्नु जरुरी छ । अब नेपालमा बिज्ञापन क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार सम्पन्न बिज्ञापन काउन्सिल स्थापनको आवश्यकता देखियको छ । जसले बिज्ञापन क्षेत्रका लागि आवश्यक निती नियमहरु तर्जुमा गरि कार्यन्यन गर्ने अधिकार पुर्ण रुपमा प्राप्त गरोस् ।
गिरिजालाई पछारेका गगनसंग कसरी जित्लान देउवा ?
बुढेसकालमा पुगेकी सासुलाई राजदुत पद उपहार दिने,इ...
लोकतन्त्रको खिलाफमा मोर्चा !
मोर्चाले आरोप लगाए जसरी नै यदि वास्तविक रुपमा नै ए...
मानवरुपी पशुलाई फाँसी दे सरकार !
हरेक दिनजशो त्यो दिन पनि म बिहान साढे पाँच बजे उठे...